Orinasa tsara indrindra namboarina China marathon mihodinkodina marathon mihazakazaka racer zinc firaka vy medaly amin'ny lanyard Mpanamboatra sy Factory | Hobrin
Ny fampahalalana fototra
China factory namboarina mihodina marathon fihodinana mihazakazaka racer zinc firaka vy medaly amin'ny lanyard
● Fanodinana: Fanariana maty
● Fitaovana: firaka zinc
● Habeny: habe mahazatra na namboarina
● Quantity: tsy misy fepetra takiana amin'ny MOQ
● Marika: lafiny tokana na lafiny roa
● Fametahana: volamena, volafotsy, varahina, nopetahany takela-bolamena fahagola, azo ovaina
● Loko: Pantone
● Fitaovana: webbing
● Fonosana: karatra OPP / PP / taratasy / kitapo volory / boaty fanomezana, na namboarina
● Fotoana santionany: amin'ny ankapobeny 7-10 andro, 3-5 andro ho an'ny baiko maika
● Fotoana famokarana: matetika 15-18 andro, filaharana maika 7-10 andro
● Fitaterana: azo ampiasaina ny sambo FedEx / DHL / UPS / TT / AIE / SEA, DDP na DDU
● Seranan-tsambo ivelany, Shenzhen, Guangdong
● Entana fandoavam-bola TT, Western Union, Paypal
Ny medaly fanatanjahan-tena dia iray amin'ny fampiasana mahazatra amin'ny famoronana medaly manokana. Hatramin'ny Lalao Olaimpika tamin'ny 1904 tany St. Louis dia medaly volamena, volafotsy ary varahina no tanjon'ny atleta. Misy mariky ny zava-bita maharesy lahatra kokoa noho ny medaly? Ny medaly dia tsy fampahatsiahivana fotsiny ny amin'ny fahombiazana, fa koa zavatra azo hanaovana am-pireharehana ary ampitaina amin'ny taranaka ho avy. Ny medaly dia azo omena ireo olona nahomby tamin'ny fanatanjahantena, akademika, miaramila ary ezaka maro hafa. Hatrany am-boalohany dia medaly no nampiasaina nitantara ny zava-bita sy ny hetsika lehibe. Dongguan Hobrin Badge sy Gift Co., Ltd dia manantena ny hitazona ity fomban-drazana ity amin'ny fiaraha-miasa aminao hamorona medaly namboarina, izay hamoaka avy hatrany tantara sy fahatsiarovana an-jatony, ary fahatsiarovana mendrika hankamamiana.
● Fitaovana avo lenta. Ireo medaly ireo dia vita amin'ny firaka zinc, ny electroplating avo lenta ary manana fiasa hisorohana ny fiovan'ny volony. Afaka mamaly ny fepetra fiarovana ny tontolo iainana.
● Ny vokatra vita an'ity medaly fanatanjahan-tena lamaody ity hatramin'ny famolavolana ka hatramin'ny famokarana dia afaka maneho tsara ny fahamasinan'ity hetsika ity.
● Raha efa fantatrao ny karazana famolavolana medaly tadiavinao, na raha mbola tsy azonao antoka izany, ny orinasa Dongguan Hobrin Badge sy Gift Co., Ltd dia hanamora ny famoronana medaly manokana. Ny tondro sy ny endrik'ireo ekipanao rehetra dia tsiambaratelo tanteraka. Hiara-hiasa aminao izahay hanao medaly misy ny zavatra ilainao, na raha tianao ny hiasa miaraka aminao hamorona zava-baovao ny ekipa mpamolavola anay. Miaraka izahay dia hamorona medaly lavorary mifanaraka amin'ny filan'ny ekipanao sy ny tetibolany.
● Maimaimpoana ny sangan'asa sy ny famolavolana medaly natokana ho anao, ary homenay anao maimaimpoana ireo porofo rehetra momba ilay tetikasa. Fantatray fa tianao ny hatolotra haingana sy ara-potoana ny medaly azonao. Andraikitsika izany. Raha misy fiatraikany amin'ny hetsika fampiatoana anao ny hetsika ataonao dia halefanay maimaimpoana ho anao ny medaly azon'ny FedEx.
Riby sy pacakging
Teo aloha: Medaly mari-bava fanomezana ho an'ny fanomezana mari-boninahitra famonoana ho faty Enamel malefaka enamel fiderana medaly miaramila miaramila
Manaraka: Mpamatsy vola fanao fahatsiarovana vy natokana ho an'i China
Medaly mari-tsoa fanomezana ho an'ny fanomezana mari-pahaizana Die-cas ...
Adiresy: No.28 Junxiang Road, vondrom-piarahamonina Shixin, tanànan'i Zhangmutou, Tanànan'i Dongguan, Faritanin'i Guangdong